Xasan sheekh oo dhagax dhigay wasaarada shaqada iyo Arimaha Bulshada(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay xaruntii Wasaaradda shaqada iyo Arimaha Bulshada ee Soomaaliya.
Madaxweyne Xassan ayaa waxaa dhagax dhiga ku wehlinaayay Masuuliyiin ka tirsanaa Wasaarada iyo Masuuliyiin kale oo la socday xaalada guud.
Waxaa goobta ka hadlay Madaxweynha Jamhuuriyadda Federaalka Xasan Sheikh Maxamuud, Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo dib u dhiska, Wasiirka Wasaradda Shaqada iyo Arrimha bulshada iyo Masuuliyiin kale oo sheegay in dayactirka Wasaarada ay imaaneyso waqti muhiim ah loona baahnaa in dhismaha lagu sameeyo dayactir.
Madaxweynha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaalia Mudane Xasan Sheekh Maxaamud oo dhagax dhigay dib u dayactirka xarunta Wasaaradda shaqada ayaa ugu baaqay Hay’adaha kale ee Dawladda inay ku daysadaan mas’uuliyinta Wasaaradda Shaqada iyo Arimha Bulshada oo hay’ad waliba ay dib u dayactirato xarunteeda, kana qayb qaadato mashruuca dhiso Dalkaada oo kaalin weyn ka qaadan kara dib u dhiska xarumaha dowladda.
Xildhibaanadii kakeenay madaxweynaha mooshinka ayaa ka soo horjeestay hadalkii jawaari